Madaxweeyne Farmaajo Oo Yiri " Qaraxa Zoobe Waxaa Ka Danbeeyay Al-Shabaab" -
HomeWararkaMadaxweeyne Farmaajo Oo Yiri ” Qaraxa Zoobe Waxaa Ka Danbeeyay Al-Shabaab”
Madaxweeyne Farmaajo Oo Yiri ” Qaraxa Zoobe Waxaa Ka Danbeeyay Al-Shabaab”
October 18, 2017 F.G Wararka 0
M/weynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo la hadlay Telefisinka Al-Jazeera ayaa sheegay in marka loo eego sida ay wax uga dhaceen isgoyska Zoobe 14 kii bishaan ay cadaynayso in qaraxaas ka dambeeyaan Al-Shabab.
M/weyne Farmaajo waxaa uu xusay in qaraxii Zoobe uu yahay mid dhibaato badan geystay marka loo eego sida uu dhacayna ay muujinayso ficilada Al-Shabab
In Al-Shabab ay leeyihiin ficilada noocaan oo kale ah willibana ay qaraxyo noocaan oo kale ah ayagu uun geysteen taasoo cadaynaysa buu yiri M/weynuhu in Al-Shabab mas’uul ka yihiin qaraxii Zoobe ka dhacay oo galaaftay nolosha in ka badan 300 oo ruux.
M/weynuha Oo ka hadlayay sababta ay Shabab u sheegan waayeen mas’uuliyadda qaraxa ayaa waxaa uu sheegay inay uga gabsadeen khasaaraha uu shacabka u geystay oo badan.
“Waa ay sheegan lahaayeen laakiin waxay dareemeen inta uu le’eg yahay khasaaraha uu geystay sidaas ayay uga aamuuseen laakiin ayagaa geystay” ayuu yiri m/weynaha Soomaaliya Max’ed Cabdulaahi Farmaajo oo la hadlayay Tv,ga Al-Jazeera.
M/weynuhu waxaa uu caalamka ka codsaday inay dawlada Soomaaliya ku gacansiiyaan dagaalka ay Al-Shabab kula jiraan haddii kale ay fikradahooda gaarsiin doonaan dalalka Maraykanka iyo Yurub.
In kastoo Shabab diideen in weerarkaasi iyagu ka dambeeyeen haddana dad badan ayaa aaminsan in Shabab ay ka dambeeyeen weerarkii dadka badan noloshooda galaaftay ee Zoobe ka dhacay.